Uqhuba njani uRhwebo loRhwebo? | Martech Zone
NgoLwesibini, Julayi 19, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 26, 2011 Douglas Karr
Ngemvume yabantu abalungileyo kwi Uphando lwe-eDigital kwaye PortalTech, Umboneleli wezorhwebo ophambili wase-UK, sibhale i-Whitepaper yabo yamva nje ngokuba iselfowuni iluchaphazela njani urhwebo kwintengiso I-infographic yentengiso. Ukubona ubungakanani obupheleleyo be-infographic, cofa nje kuyo.
Ukuba ungathanda ukusebenzisa i-Infographic kwindawo yakho, kuya kufuneka usebenzise le khowudi ilandelayo:
Khuphela ukutshintsha kwezinto kwi-multichannel yokukhangela kunye nokukhetha ukuthenga . I-infographic yentengiso nguDK New Media
Iinkcukacha-manani ziyamangalisa. Inikwe iindaba ezithandwa ngabathengisi Imida iyavalwa kwaye Ukuthenga okungcono kuyancipha ukunyathela kwayo, andiqinisekanga ukuba ngaba ziindaba ezilungileyo okanye ezimbi. Kubonakala kum ukuba abathengisi bezitora ezinkulu bayabiza ukuqhuba, babangele ukugcwala, kwaye abanamandla.
Ukuba sinokusebenzisa ii-smartphones ngokufanelekileyo ukwenza uphando ngezigqibo zokuthenga- kwaye undwendwele kuphela ukuba singathanda ukuthatha izinto esizithengileyo- ayisiyonto ilungele wonke umntu? Andiqinisekanga ukuba kukho ilahleko yemisebenzi enikiweyo yokuba ukuhanjiswa kwempahla enkulu kunye nokuhambisa kuya kusetyenziswa (okungancediyo ukungasebenzi kakuhle kwamandla, ndiyaqikelela).